Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Abakhangisi abaningi bakhathazeke ngokweqile ngokwanda kwethrafikhi kumasayithi abo kunokuguqula ithrafikhi abanayo. Izivakashi zifika kusayithi lakho nsuku zonke. Bayayazi imikhiqizo yakho, banesabelomali, futhi bakulungele ukuthenga… kepha awubahehi ngomnikelo abadinga ukuguqula. Kulo mhlahlandlela, uBrian Downard we-Eliv8 ukukhombisa igxathu negxathu ukuthi ungakha kanjani ifaneli yokuthengisa ezenzakalelayo ongakwazi ngayo
I-AddThis yengeza ukuqondiswa komuntu siqu ukuthuthukisa ukuzibandakanya, ukuguqulwa nemali engenayo
Lwesine, Disemba 4, 2014 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Iningi lomhlaba wobuchwepheshe bokumaketha ligxile ekutholeni ukuvakashelwa. Ukuxhuma kokuxhumanisa kuvaliwe kumashadi futhi kuholela emiphumeleni emibi kubakhangisi. Ukuletha umuntu kusayithi lakho empeleni kulula kakhulu, kepha ukumgcina lapho futhi empeleni ukubakhuthaza ukuthi benze ibhizinisi nawe kunzima kakhulu. Ngisho nasencwadini efana neyethu, ukwandisa ukubukwa kwethu kubalulekile - kepha ngaphandle kokuthi abantu basebenzisane nemikhiqizo esikhuluma ngayo, kungcono
Isikhathi sokufunda: 1 iminithi Ngonyaka odlule, sihlolisise izixazululo ezahlukahlukene zamakhasimende ethu e-B2B ukukhomba ngokunembile izivakashi zewebhusayithi. Abantu bavakashela isayithi lakho nsuku zonke - amakhasimende, abaholayo, izimbangi, kanye nemidiya - kepha ama-analytics ajwayelekile awanikeli ukuqonda kulawo mabhizinisi. Ngaso sonke isikhathi lapho othile evakashela iwebhusayithi yakho, indawo yabo ingabonakala ngekheli labo le-IP. Lelo kheli le-IP lingaqoqwa ngezixazululo zenkampani yangaphandle, ukuhlonza kufakwe, nemininingwane ethunyelwe
Isikhathi sokufunda: 4 imizuzu Ngemininingwane ephezulu yedatha eyenziwe kuziteshi eziningi zokumaketha, izinhlobo ziphonswa inselelo yokuhlela nokusebenza kwamafa wedatha afanele ukukhulisa ukusebenza kwesiteshi esiwela. Ukuqonda kangcono izithameli zakho ezihlosiwe, shayela ukuthengisa okuningi, futhi wehlise imfucuza yokumaketha, udinga ukuvumelanisa ukuhlukaniswa komkhiqizo wakho nokusebenza kwedijithali nokubika. Kufanele uqondanise ukuthi kungani bethenga nokuthi ngubani othengayo (isigaba sezethameli) kulokho (isipiliyoni) nokuthi kanjani (ukwenziwa kwedijithali) ukuze konke
NgeSonto, ngoJuni 13, i-2010 NgeSonto, ngoJulayi 27, i-2014 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Sekuvele kunezibalo ezithile eziphoqayo ukuthi ividiyo inyusa amazinga okuguqulwa kuma-imeyili ngo-200% kuye ku-300%. Ividiyo isiqala ukudlala indima enkulu kuzo zonke iziteshi zokumaketha. I-Imavex iyinkampani yokuthuthukiswa kwewebhu eqanjwe njengenye yezinkampani zokukhangisa ezinjini eziphambili ezweni. Bengikhuluma noRyan Mull futhi ubalule ukuthi babone ukuthuthuka okuphawuleka emazingeni wokuguqulwa kokukhokha ngokuchofoza ngakunye kwamakhasimende abo lapho afaka ikhwalithi ephezulu